एनआरएनएको निर्वाचनमा कुन उम्मेद्वारले कति मत पाए ? (मत परिणामसहित) – ताजा समाचार
एनआरएनएको निर्वाचनमा कुन उम्मेद्वारले कति मत पाए ? (मत परिणामसहित)
गैर आवासीय नेपाली संघको नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी भएका छन् । निर्वाचन समितिले अध्यक्षसहित सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरुले प्राप्त गरेको मत सार्बजनिक गरेको छ । जसमा एनआरएनएको अध्यक्षमा विजयी कुमार पन्तले १२ सय १७ मत ल्याएका छन् भने उनका प्र ति द्ध न्दी कुल आचार्यले एक हजार ७० मत पाए।
एनआएनएको चुनावमा भोट हालेर फर्किदै गरेका दुई महिला । तस्विर ताजा समाचार
यस्तै महासचिवमा हेमराज शर्मा, सचिवमा गौरी जोशी, आरके शर्मा, कोषाध्यक्षमा महेशकुमार श्रेष्ठ, सहकोषाध्यक्षमा लोक दाहाल तथा महिला संयोजकमा भोमा लिम्बु विजयी भएका छन्
पन्त संघको छैटौँ अध्यक्ष बनेका छन् । यसअघि संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले दुई कार्यकाल, देवमान हिराचनले एक कार्यकाल, जीवा लामिछानेले एक कार्यकाल, शेष घलेले दुई कार्यकाल तथा भवन भट्टले एक कार्यकाल संघको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
सबै उम्मेद्वारहरुको मतपरिणाम जस्ताको तस्तै
प्रवास, ब्यानर न्यूज